admin – FBV SPORT NEWS
အင်္ဂလန်ကိုစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်လိုက်တဲ့ အီတလီအသင်းခေါင်းဆောင်ချီလီနီ အင်္ဂလန်ကို စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမပြောခင် ချီလီနီ အကြောင်းသိထားသင့်တာရှိပါတယ်။ ချီလီနီဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင့်တင်းပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိုးစစ်ဆင်နွဲတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံခြားသတင်းတွေမှာ တွေ့နိုင်လို့ပါ သတင်းကရိုးရိုးရေးရင်သတင်းပဲပေါ့ဗျာ။ များသောအားဖြင့်ဘောလုံးသတင်းဆိုတာက ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ့်ပရိတ်သတ်နဲ့ကိုက်တာကို ကွန့်ရတာမျိုးမဟုတ်လား။ ထားတော့။နိုင်ငံခြားကရေးတာကို ဒဲ့ကြီးဘာသာပြန်ပြီး …
တိုက်စစ်မှူးကိုကိုရဲ့ကြင်နာမှုတွေကိုReplyပြန်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်တင်းနစ်ကြယ်ပွင့်လေး တစ်နေ့ကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခဲ့ရတဲ့ တင်းနစ်အလှမယ်လေးEmma Raducanu ဟာ သူမကို အင်္ဂလန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကတိုက်စစ်မှူးကိုကိုရက်စ်ကို Replyပြန်ပြီး အသိအမှတ်ပြုစာပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှူးကိုကိုရက်စဖို့လေးဟာဗြိတိသျှတင်းနစ်ကြယ်ပွင့် Emma Raducanu Wimbledon Open Tennis ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခွာပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်မကျဘဲထပ်မံကြိုးစားဖို့အကြံဉာဏ်အချို့ကိုပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ …
ဒီဂီယာနဲ့အိုးထရက်ဖို့လမ်းခွဲက လမ်းလွဲသွားနိုင်သလား? ဒီနှစ်အပြောင်းအရွေ့ဈေးကွက်မှာ ယူနိက်တက်အတွက် အကြီးအကျယ်ခေါင်းခဲစရာ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂိုးသမားပြဿနာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ သတင်းထူးလာပါတယ်။ ယူနိက်တက်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် အပြောင်းအရွေ့သတင်းတွေမှာ နာမည်ကြီးသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့Rudy Galettiကတော့ ယူနိက်တက်ဟာ ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကို ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဒီနှစ်မှာ အဌားထွက်ကစားစေလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ …
မန်ယူကို အကြီးကြီးထင်ပီး အချီကြီး ဂျင်းထည့်ဖို့ ဖိအားပေးနေတဲ့ စပါး ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှ ဒေါ့မွန်အသင်းက တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမားဆန်ချိုကို ပေါင် ၇၃သန်းနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းကို အကြီးကြီးအထင်ကြီးနေပုံရတဲ့ စပါးက သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှူးကိန်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စစကားစလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟယ်ရီကိန်းကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အနေနဲ့ …
လက်နှေးရင်Crushကိုငေးနေရမယ့်အဖြစ် တူချဲလ်ကြောင့် ကြုံသွားနိုင်တဲ့ မန်ယူ မန်ယူအသင်းဟာ ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ အမွန်းတင်ခံနေရတဲ့ ရန်းနက်အသင်းက ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့်လေးကို လက်ရှိမှာပစ်မှတ်ထားလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့နည်းပြတူချဲလ်ကတော့ သူ့ရဲ့ဗြူးတီးစလွန်းမှာ တက်သစ်စမော်ဒယ်ကို Roleတင်ဖို့ ပစ်မှတ်စာရင်းထဲထည့်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ လန်ဒန်အခြေစိုက်အားကစားသတင်းဌာနတစ်ခုကရေးသားထားပါတယ်။ တူချဲလ်အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာလည်း သူတို့အသင်းတိုက်စစ်အတွက် ဒေါ့မွန်က …
မန်ယူမှာ တစ်ကယ်လိုနေတာ ဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲဆိုတာ ထောက်ပြသွားတဲ့ Paul Parker မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီနှစ်နွေရာသီဈေးကွက် အပြောင်းအရွေ့မှာ ဈေးဦးပေါက်အနေနဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းက ဂျေဒန်ဆန်ချိုကို ပေါင် ၇၃သန်းနဲ့ ခြေမြန်လက်မြန်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ယူနိက်တက်တို့ ခေါင်းခဲနေတဲ့ ပြဿနာကတော့ ပေါ့ဘာရဲ့ …
ယူနိက်တက် ဆန်ချိုကို ခေါ်ခဲ့တာ အမှားတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီလား?
ဆန်ချိုကို ခေါ်ခဲ့တာ အမှားတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီလား? မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဆန်ချိုကို ခေါ်ခဲ့တာအမှားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလားဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေကို ခုရက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသတင်းမီဒီယာတွေက ဆောင်းပါးအဖြစ်ရေးသားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကရေးသားထားကတော့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ဆန်ချိုကို ပေါင် ၇၃သန်းထိ ဈေးကြီးပေးပြီး အလျင်တစောဝယ်ခဲ့တာဟာ လက်ရှိတက်နေတဲ့ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်စေအောင်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ …
July 8, 2021 By admin Sports News
ယူနိက်တက်ကြောင့် ဟာလန်းကို ဆုံးရှံးရဖွယ်ရှိနေတဲ့ တူချဲလ်ရဲ့မိတ်ကပ်ဆိုင် ရာသီဝက်မှာ ကွင်းထဲဝင်ပြီး မကြာခင်မှာ ဖလားသိမ်းပိုက်ပြသွားတဲ့ တူချဲလ်ကတော့ သူ့ရဲမိတ်ကပ်ဆိုင်ချဲလ်ဆီးအသင်းအတွက် တိုက်စစ်ကိုအားဖြည့်ဖို့ ဟာလန်းကိုတစ်ပိုင်းသေလောက်အောင် လိုချင်နေပါတယ်။ ဟာလန်းဆိုတာတစ်ကယ်တော့လည်း ချိန်တိုင်းလွဲတတ်တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ရဲ့ ကာလရှည်ပစ်မှတ်ကြီးဖြစ်ပြီး ခုခါမှာတော့ ယူနိက်တက်တို့ဟာ ဖင်မနိုင်ပဲ …
ဗြိတိလျှ တင်းနစ်ကြယ်ပွင့်လေးကို အကွက်ရွေ့လိုက်တဲ့ စော်ပစ်ကောင်လေးရက်စဖုတ် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးကိုကို မားကပ်ရက်စဖုတ်လေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသဲကွဲတဲ့ဒဏ်ရာ နဲ့ပုခုံးဒဏ်ရာတို့ကြောင့်တော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အသဲကွဲဒဏ်ရာကလည်း ၈နစ်လောက်တွဲလာတဲ့ ငယ်ချစ်ဦးက ပစ်သွားတာဖြစ်လို့ “ငယ်ချစ်ဦးဝေးဖူးပေါ့ “ဆိုသလို တော်တော်လေးခံစားရမှာအသေအချာပါပဲ။(အတူတူပဲကိုကိုယ်တွေက၁၀နှစ်) ဒါပေမယ့် ရက်စဖို့လေးက စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ …
ပလိုင်းပေါက်ဖားကောက်နောက်တန်းအတွက် Plan Cကိုပြင်ဆင်ရတော့မယ့် ယူနိက်တက် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပလိုင်းပေါက်ဖားကောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်တန်းကိုပြုပြင်ဖာထေးဖို့ ယူနိက်တက်တို့ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။၊ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာ နှစ်ပေါင်း၄နှစ်လောက်ကြာအောင်ပစ်မှတ်ထားခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းက မန်စီးတီးကစားသမားဟောင်းဆန်ချိုကိုရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နောက်ခံလူပြဿနာကို စတင်ဖြေရှင်းဖို့လုပ်ဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ လေးရာသီဆက်ဖလားလက်မဲ့နဲ့ဘွကြီးကို အဆုံးသတ်ချင်တာကြောင့် ဆန်ချိုပြီးနောက်မှာ ယူနိက်တက်အသင်းခေါင်းဆောင်မက်ဂွိုင်းယားနဲ့တွဲဖက်ကစားနိုင်မယ့် ကစားသမားကို ပြင်သစ်ကစားသမား …
July 6, 2021 By admin Sports News